Kazakhstan: Tondra-drano nahafaty olona 47, an-jatony maro no tsy manan-kialofana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Marsa 2010 6:22 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Italiano, македонски, English
Olona aman'arivony no nafindra toerana taorian'ny fianjeran'ny barazy 2 tany Kazakhstan ny alakamisy sy zoma lasa teo. Tao amin'ny distrikan'i Aksuiky, ao avaratry ny renivohitra ekonomika Almaty no niseho ny loza. KZblog milaza:
Tamin'ny alakamisy dia nirodana ny barazy tao amin'ny faritry Karatalsky, fivondronan'i Almaty, taorian'ny fitsonihan'ny ranomandry be loatra. Nialokaloka tao amin'ny sekoly akaiky azy ireo ny olona 280. Ny zoma, barazy iray hafa koa no nianjera, sy fitehirizana ranon'ny faritra Aksuiky. Kyzyl-Agash, tanàna misy mponina 3000, no difotry ny rano. Voafindra ny ankamaroan'ny mponina saingy tsy izy rehetra.
Nandritra ny faran'ny herinandro dia 20 hatramin'ny 35 no maty, raha tsy isaina ny tsy hita popoka. Hatramin'ny alatsinainy dia 47 no maty araka ny fanisana ofisialy. Nangataka ny vadin-tany ny filoha Nazarbaayev hanao famotorana mikasika vono olona an'ny tompon'ny barazy Kyzyl-Agash. Araka ny fantatra taorian'ny loza dia tantanan'ny orinasa tsy miankina ireo fitehirizana rano sy barazy ireo.
Lord-Fame mamoaka vaovao feno kokoa[ru]:
Tonga ny rano be. Efa nilazana mialoha izahay, ary efa tokony ho vonona. tamin'ny 1 ora maraina, tonga tany akaikin'i Taldy-Korgan (Kaomina Almaty) ny mpitandro ny filaminana ary nanery ny mponina handeha. Tokony ho nanaraka an'izay daholo.
Tany Kyzyl-Agash, manam-boninahitra iray no nitety trano nilaza fa mety tsy hahatohitra ny rian-drano be ny barazy. Nanomboka namindra ny vehivavy sy ny ankizy nankany amin'ny tanàna akaiky azy ny mponina. Tamin'ny hariva dia tonga ny tompon'andraikitra ao amin'ny distrika, niteny tamin'ny olona tsy hatahotra ary nilaza fa voafehy ny raharaha. natoky azy ny olona. Ny ankamaroan'ireny maty daholo ankehitriny. Tahaka izao sisa ny tanànan'i Kyzyl-Agash nahafinaritra fahiny:
Nirodana ny barazy vokatry ny orana nikija niampy ranomandry nitsonika. tsy mandeha intsony ny antso an-tariby. Nentin'ny rano koa ny tetezana tao Kyzyl-Agash, teo ambonin'ny lalana migodana mampitohy ny atsimo sy ny avaratra[ru]:
Ny mponina ao Egen-Su tanàna iray any ambadika, dia voafindra ara-potoana, fa ny omby no be maty. Tany Kyzyl-Agash, tokony ho voasoroka ihany ny loza raha nandamina ara-potoana ny manam-pahefana. Natahotra hiteraka korontana mantsy izy ireo tany an-toerana… Nahoana àry izy no tsy natahotra maty?
Any amin'ny toby miaramila, na any amin'ny sekoly, na eny amin'ny garani Taldy Kurgan ny ankamaroan'ireo nafindra toerana ankehitriny. mangataka ireo mpijery azy ny fahitalavitra hanome sakafo sy fitafiana.
07 Jolay 2021Azia Afovoany sy Kaokazy
Soratra miverina: Global Voices teny Malagasy » Kazakhstan: Tondra-drano nahafaty … | Actualités du monde
[…] la source : Global Voices teny Malagasy » Kazakhstan: Tondra-drano nahafaty … eazArticles Complémentaires3 avril 2010 — Global Voices en Français » Kazakhstan : Les […]
06 Avrily 2010, 21:43